Ahoana ny fanondranana rakitra ao amin'ny Adobe Illustrator amin'ny fomba matihanina? | Famoronana an-tserasera
Pablo Gondar | | Graphic Design, sary, Tutorials
Ianaro ny fomba fanondranana rakitra ao amin'ny Adobe Illustrator amin'ny fomba matihanina amin'ny alàlan'ny rafitra fanondranana voafehy ahafahanao misafidy endrika, refy ary sanda isan-karazany mba ho marimarina kokoa ny fanondranana anao ary mety manondrana rakitra marobe amin'ny iray ihany fotoana fanatrarana miaraka amin'izany fomba izany zà ny fotoana amin'ity fizotrany lehibe ity amin'ny famolavolana sary.
Ny fanondranana rakitra dia zavatra tsy maintsy tadidintsika foana amin'ny tetik'asa sary rehetra satria fantatry ny matihanina amin'ny zava-kanto sary rehetra, fisie eo amin'ny efijery fotsiny ny rakitra eo amin'ny efijery, ny tena zava-dehibe dia ny fanamboarana izay novolavolaintsika mba haondrana araka ny tokony ho izy. ampiasaina amin'ny tohanana izay nanamboarana azy. Izy io dia dingana iray izay mety ho lava raha tsy fantatsika ny fomba hanaovana io fomba io miaraka. Hampianariko anao ny fomba hanondranana ireo rakitra Illustrator anao amin'ny fomba matihanina, dingana iray izay ataoko isan'andro amin'ny tontolon'ny famoahana, fanaovana logo, sora-baventy, sns.
Rehefa hanondrana rakitra iray isika, ny zavatra mazàna atao dia ny manondrana tsirairay ny rakitra na amin'ny fisafidianana singa manokana na amin'ny fanondranana artboard iray manontolo ao amin'ny Illustrator, fa inona no mitranga rehefa manana rakitra marobe isika ary te hanondrana azy ireo amin'ny kalitao na habe samihafa? Ity dingana ity dia azo atao amin'ny Illustrator amin'ny fomba mandeha ho azy, tsara raha mitahiry fotoana.
Aiza amin'ny endriny no ilaina ity fizotrany ity?
Ity dingana ity mety ho tena ilaina amin'ny fanondranana sary famantarana, araka ny fantatsika tsara, ny sary amina orinasa dia amina kinova maro an'isa amin'ny sary ahafahantsika mahita loko, endrika, famaranana sns. Ny logo dia tsy aondrana amina vahaolana tokana fa alefa amina fanapahan-kevitra maromaro arakaraka ny tanjony: raha Internet ny logo dia hampiasa 72ppi isika ary raha hanaovana pirinty dia 300ppp no ​​ampiasaina, ho an'ity taratasy rehetra ity ny fanondranana matihanina dia mety satria mamela antsika hanondrana ny zava-drehetra indray mandeha raha ny ho hitantsika etsy ambany.
Rehefa manana fisie malalaka be isika ao amin'ny sehatr'asa misy antsika ao amin'ny Illustrator, ny sisa tsy maintsy ataontsika hisintona azy ireo mankany amin'ny faritra fanondranana izay ho hitantsika izao.
Raha te hanana ny menio fanondranana dia tsindrio fotsiny eo an-tampon'ny Fanondranana varavarankely / loharanom-baovao, tsindrio ity varavarankely ity ary misy menio vaovao hisokatra amin'ny faritra ambany ankavia amin'ny programa.
Avy eo avoahy ny menio fanondranana ny zavatra tsy maintsy ataontsika dia ny manomboka misintona ireo singa rehetra tadiavintsika manondrana miaraka. Raha manova ny fisie orizinaly isika dia haterina ho azy ireo amin'ireo rakitra nitarihana mankany amin'ny faritra fanondranana, tonga lafatra izany satria im-betsaka isika no mila manova haingana ny rakitra iray.
Ny zavatra manaraka tokony hataontsika mba hanondranana miaraka miaraka amin'ny Illustrator dia safidio izay tianay ho an'ny fisie anay, ho hitantsika ny fomba ahafahan'ny menio mamela antsika hanova ny fandosirana, ny famahana, ny habeny, ny endrika sns. Ny tena be mpitia indrindra amin'ny fanondranana rakitra dia: famahana sy ny endrika; ireo data ireo dia mahavita manova ny kalitaon'ny fanondranana anay sy ny endrika, sanda ilaina amin'ny haino aman-jery samihafa.
Izahay dia manondrana tsikelikely ny volavolantsika amin'ny alàlan'ity rafitra ity izay ahafahantsika misafidy ireo rakitra rehetra tianay haondrana amin'ny safidy maro samihafa, hamonjy fotoana be dia be izahay amin'ity dingana ity.
Amin'ny ampahany hametrahantsika ny loharano dia afaka manova ny anaran'ny fisie azontsika isika alaharo tsara kokoa izy ireo ary noho izany aza fadio ny very any amin'ireo fisie an'arivony. Ny tsara indrindra dia ny fanondranana arakaraka ny asa ananantsika isaky ny latabatra fiasana, ny dingana ataoko dia ny famoronana latabatra fiasana maromaro ary manomboka manondrana azy ireo amin'ny fomba voalamina.
Ohatra raha manana a latabatra miasa Amin'ny sarin'orinasa izay ataoko dia ny fanondranana ny sary orinasa ihany, avy eo manondrana endrika hafa namboarina tamin'io marika io aho fa tsy tafiditra ao amin'ilay sary famantarana, ohatra, miara-manondrana ny sora-baventy sy volavolan-doka noforonina ho an'ity marika ity. Fomba iray hafa ny fananana fisie Illustrator isan-karazany hanana ny endriny izay hampisarahantsika bebe kokoa.
Na inona na inona ny rafitray, ny idealy dia ny mitsitsy fotoana amin'ny dingana rehetra azontsika atao sy manondrana miaraka, mamonjy fotoana be dia be ary mahazo valiny matihanina noho ny lamina ahafahantsika miasa miaraka amin'ireo rakitrao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » sary » Ahoana ny fanondranana rakitra ao amin'ny Adobe Illustrator